3D printer spare parts uye kugadzirisa | hardware yemahara
3D printer spare parts uye kugadzirisa
3D maprinta ane matambudziko uye nekuputsika senge chero mimwe michina, saka iwe unofanirwa kuziva maitiro ekugadzirisa kwakaringana kunonoka kuoneka kwematambudziko, pamwe nekuziva zvinogoneka. mhinduro dzekuputsika uye zvikamu zvakasara zve 3D printer iyo yauinayo yekutsiva iyo yakakuvadzwa kana zvichidikanwa. Zvese izvo iwe zvauchadzidza neiyi gwara rechokwadi.
*CHIZIVISO CHAKAKOSHA: Kune dzakawanda mhando dze 3D printers, saka panogona kunge paine misiyano mishoma pakati pavo pakuongorora nekugadzirisa. Zvakare, mamwe maprinta anogona kunge akaomarara, seaya emuindasitiri. Naizvozvo, kana iwe usingazivi maitiro ekuita, zviri nani kutarisa kune bhuku rekushandisa yako chaiyo modhi kana yehunyanzvi sevhisi yeprinta brand yako. Gwaro iri rinonyanya kuitirwa maprinta epamba.
HENTEK extruder hotend... Ona maficha Ona kupiwa
SIQUK Teflon chubhu... Ona maficha Ona kupiwa
JOREST 7 Pieces Printer... Ona maficha Ona kupiwa
5 Zvimedu FEP Firimu... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	HENTEK extruder hotend...
Unhu hwemutengo	SIQUK Teflon chubhu...
Chatinoda	JOREST 7 Pieces Printer...
5 Zvimedu FEP Firimu...
1 Izvo zvakanakisa spare parts zve3D printers
1.1 Mabhureki / Plate Yekutakura
1.3 PEI pepa rekuvandudza kunamatira uye kubviswa kwechikamu
1.5 prinda base plate
1.6 Thermal namatidza
1.7 Extruder kana hotend
1.9 PTFE chubhu
1.11 Simba rekupa 3D printer
1.13 Bhandi rine mazino
1.15 kubereka kana kubereka
1.16 Kupisa kupisa
1.18 FEP peji
1.21 LCD skrini
1.22 UV exposure rambi
1.23 Resin tangi
1.24 Zvimwe zvekushandisa uye zvishandiso
1.24.1 Vhara Nozzle Cutter Kit
1.24.2 Kubvisa uye kuchenesa mudziyo kit
1.24.3 Kiti yemafunnels uye mafirita eresin
1.24.4 Dry uye yakachengeteka filament kuchengetedza
2 Kugadziriswa kwe3D printers
2.1 Kuenzana kana Calibration yemubhedha
2.3 Chengetedza kunamatira kwakanaka
2.4 Nguva yeBelt Tension Adjustment
2.6 Kuchenesa kwemuromo
2.7 Filament Maintenance
2.8 Nozzle replacement
2.9 kuchenesa mubhedha
2.10 Kucheneswa kwekunze (zvakawanda)
2.11 kuchenesa mukati
2.12 chenesa resin
2.13 Gadziridza 3D printer firmware
3 Nhungamiro yekuongorora uye kugadzirisa zvakajairika 3D printer matambudziko
3.1 Sei printa yangu ye3D isiri kudhinda?
3.2 Iyo muromo iri pachinhambwe chisina kufanira kubva pamubhedha
3.3 Zvikamu zvakarumwa kana zvisipo
3.4 Printer inosiya chikamu chakadhindwa chiri pakati
3.5 Zvidiki-diki hazvina kudhindwa
3.6 Kutadza kunamatira kwechidimbu
3.7 Makomba asina kuzadzwa muchikamu chekupedzisira
3.8 Zvisina kuzadzwa voids muzvikamu kana zvikamu zvitete zvechikamu
3.9 Extruder mota yakawedzera kupisa
3.10 Warping kana deformation: zvikonzero uye mhinduro
3.11 3D printer kugadzirisa netambo kana fraying
3.12 Iyo muromo yakavharwa
3.13 Layer shifting kana layer displacement
3.15 Plastiki yakawandisa nenzira yekudonha
3.16 mavanga pamusoro
3.17 pasi extrusion
3.21 Kupisa muzvikamu zvakadhindwa
3.22 Delamination mukurapa resin
3.23 Kudhinda vacuum mune resin printer
3.24 hunhu husina kuvandudzwa
3.25 Makomba kana kucheka
3.26 Mitswe inooneka muchikamu chekutanga
3.28 Hushasha kana mapundu
3.30 Kushaikwa kwekunamatira mune resin 3D printer
3.31 Silhouettes pachigadziko chekudhinda (resin 3D printer)
3.32 The leveling screw yasvika painogumira
3.33 Dudzira 3D printer kukanganisa macode
Izvo zvakanakisa spare parts zve3D printers
Heano mamwe kurudziro yezvikamu zvakasara zve 3D printers kukutungamira, kunyangwe asiri ese anoenderana nechero 3D printer modhi:
Mabhureki / Plate Yekutakura
Befenybay - Kiti ye... Ona maficha Ona kupiwa
Simudzira Kits e... Ona maficha Ona kupiwa
Zeberoxyz Modular Kit... Ona maficha Ona kupiwa
Tsigira Plate, Plate... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	Befenybay - Kiti ye...
Unhu hwemutengo	Simudzira Kits e...
Chatinoda	Zeberoxyz Modular Kit...
Tsigira Plate, Plate...
Sovol Creality Ender 3... Ona maficha Ona kupiwa
Creality Ender 3 Bed... Ona maficha Ona kupiwa
IdeaFormer Magnetic Bed... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	Sovol Creality Ender 3...
Unhu hwemutengo	Creality Ender 3 Bed...
Chatinoda	IdeaFormer Magnetic Bed...
PEI pepa rekuvandudza kunamatira uye kubviswa kwechikamu
PEI Sheet 235x235mm, mubhedha... Ona maficha Ona kupiwa
HICOP Platform... Ona maficha Ona kupiwa
IdeaFormer PEI 220x220... Ona maficha Ona kupiwa
Toaiot System... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	PEI Sheet 235x235mm, mubhedha...
Unhu hwemutengo	HICOP Platform...
Chatinoda	IdeaFormer PEI 220x220...
YIXISI 4pcs Zvitubu... Ona maficha Ona kupiwa
AIEX 8 Pieces Column ye... Ona maficha Ona kupiwa
Furiga Column ye... Ona maficha Ona kupiwa
Bed parts... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	YIXISI 4pcs Zvitubu...
Unhu hwemutengo	AIEX 8 Pieces Column ye...
Chatinoda	Furiga Column ye...
prinda base plate
BIGTREETECH SKR Mini E3... Ona maficha Ona kupiwa
printer motherboard... Ona maficha Ona kupiwa
AZDelivery 3 x CNC Shield... Ona maficha Ona kupiwa
BIGTREETECH Octopus V1.1... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	BIGTREETECH SKR Mini E3...
Unhu hwemutengo	printer motherboard...
Chatinoda	AZDelivery 3 x CNC Shield...
Imwe inonakidzwa neThermal Paste ... Ona maficha Ona kupiwa
Mari Qiu... Ona maficha Ona kupiwa
Total Utility Pasta... Ona maficha Ona kupiwa
Easycargo Thermal paste,... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	Imwe inonakidzwa neThermal Paste ...
Unhu hwemutengo	Mari Qiu...
Chatinoda	Total Utility Pasta...
Easycargo Thermal paste,...
Extruder kana hotend
HUSZZM E3D V6 Kit J-Musoro... Ona maficha Ona kupiwa
Extrusion Head Kit... Ona maficha Ona kupiwa
3D Printer DIY Kit... Ona maficha Ona kupiwa
JHead V6 Hotend Sets,Kit... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	HUSZZM E3D V6 Kit J-Musoro...
Unhu hwemutengo	Extrusion Head Kit...
Chatinoda	3D Printer DIY Kit...
JHead V6 Hotend Sets,Kit...
Haisheng 5PCS Nozzles... Ona maficha Ona kupiwa
5 boquillas de acero... Ona maficha Ona kupiwa
3D Printer Nozzle... Ona maficha Ona kupiwa
RUNCCI-YUN 30 mm de largo... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	Haisheng 5PCS Nozzles...
Unhu hwemutengo	5 boquillas de acero...
Chatinoda	3D Printer Nozzle...
SIENOC 2x 1M PTFE Teflon... Ona maficha Ona kupiwa
Capricorn Bowden Tube... Ona maficha Ona kupiwa
KSTE PTFE White Teflon... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	SIENOC 2x 1M PTFE Teflon...
Unhu hwemutengo	Capricorn Bowden Tube...
Chatinoda	KSTE PTFE White Teflon...
SIQUK Teflon chubhu...
SKARF 3Pcs Nyanzvi... Ona maficha Ona kupiwa
Wendry Connector... Ona maficha Ona kupiwa
UniTak3D 8Pcs PC4-M10... Ona maficha Ona kupiwa
YOTINO 10 Pieces PC4-M6... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	SKARF 3Pcs Nyanzvi...
Unhu hwemutengo	Wendry Connector...
Chatinoda	UniTak3D 8Pcs PC4-M10...
YOTINO 10 Pieces PC4-M6...
Simba rekupa 3D printer
Quimat 2pcs MOSFET... Ona maficha Ona kupiwa
DollaTek Module... Ona maficha Ona kupiwa
ARCELI Module... Ona maficha Ona kupiwa
PChero caliente cama de... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	Quimat 2pcs MOSFET...
Unhu hwemutengo	DollaTek Module...
Chatinoda	ARCELI Module...
Creality Stepper Motor... Ona maficha Ona kupiwa
TMC2210 Stepper Driver-... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	AZDelivery 3 x CNC Shield...
Unhu hwemutengo	Creality Stepper Motor...
Chatinoda	TMC2210 Stepper Driver-...
Creality Stepper Motor...
Bhandi rine mazino
DollaTek 5 Mamita 6 mm... Ona maficha Ona kupiwa
3D Printer Strap... Ona maficha Ona kupiwa
ruthex Nguva yebhandi GT2... Ona maficha Ona kupiwa
SPTwj 5 mamita 3D... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	DollaTek 5 Mamita 6 mm...
Unhu hwemutengo	3D Printer Strap...
Chatinoda	ruthex Nguva yebhandi GT2...
SPTwj 5 mamita 3D...
Synchronous vhiri nebhandi... Ona maficha Ona kupiwa
Bhandi Pulleys... Ona maficha Ona kupiwa
Dadabig 8Pcs 3D Printer... Ona maficha Ona kupiwa
Tonysa 5 PCS Aluminium... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	Synchronous vhiri nebhandi...
Unhu hwemutengo	Bhandi Pulleys...
Chatinoda	Dadabig 8Pcs 3D Printer...
kubereka kana kubereka
Ruesous 20 x Bearings... Ona maficha Ona kupiwa
3D FREUNDE Yekutanga Igus... Ona maficha Ona kupiwa
Pulley bearings ye... Ona maficha Ona kupiwa
RUNCCI-YUN 10pcs... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	Ruesous 20 x Bearings...
Unhu hwemutengo	3D FREUNDE Yekutanga Igus...
Chatinoda	Pulley bearings ye...
Easycargo 4pcs... Ona maficha Ona kupiwa
kutsvaga mepu 10x10x10mm... Ona maficha Ona kupiwa
Vipxyc Heat Sink... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	Easycargo 4pcs...
Unhu hwemutengo	kutsvaga mepu 10x10x10mm...
Vipxyc Heat Sink...
RUNCCI-YUN 3 Zvimedu... Ona maficha Ona kupiwa
ICQUANZX 4 Zvimedu DC 12V... Ona maficha Ona kupiwa
YOTINO 4Pcs Fans... Ona maficha Ona kupiwa
Bigxin 4Pcs Fan... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	RUNCCI-YUN 3 Zvimedu...
Unhu hwemutengo	ICQUANZX 4 Zvimedu DC 12V...
Chatinoda	YOTINO 4Pcs Fans...
Mafirimu ekuparadzanisa... Ona maficha Ona kupiwa
Iyo yakanyanya FEP firimu ... Ona maficha Ona kupiwa
ELEGOO 5PCS FEP Firimu... Ona maficha Ona kupiwa
KOYOFEI 5 Zvimedu FEP Firimu... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	Mafirimu ekuparadzanisa...
Unhu hwemutengo	Iyo yakanyanya FEP firimu ...
Chatinoda	ELEGOO 5PCS FEP Firimu...
KOYOFEI 5 Zvimedu FEP Firimu...
Furiga Lubricants... Ona maficha Ona kupiwa
3-IN-ONE Nyanzvi -... Ona maficha Ona kupiwa
Bisofice 2 Zvimedu Super... Ona maficha Ona kupiwa
3 EN UNO Profesional... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	Furiga Lubricants...
Unhu hwemutengo	3-IN-ONE Nyanzvi -...
Chatinoda	Bisofice 2 Zvimedu Super...
ARCELI ARTCI Thermistors... Ona maficha Ona kupiwa
SOOWAY 6 Zvidimbu 6 x 20... Ona maficha Ona kupiwa
HICOP Sensor/Tembiricha... Ona maficha Ona kupiwa
WiDream 3 pcs Thermistor... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	ARCELI ARTCI Thermistors...
Unhu hwemutengo	SOOWAY 6 Zvidimbu 6 x 20...
Chatinoda	HICOP Sensor/Tembiricha...
WiDream 3 pcs Thermistor...
5,5" LCD sikirini ye... Ona maficha Ona kupiwa
LCD skrini 5,5 ... Ona maficha Ona kupiwa
ELEGOO LCD Monochrome... Ona maficha Ona kupiwa
Bisofice Zvikamu zve... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	5,5" LCD sikirini ye...
Unhu hwemutengo	LCD skrini 5,5 ...
Chatinoda	ELEGOO LCD Monochrome...
Bisofice Zvikamu zve...
UV exposure rambi
MOVKZACV 3D Printer... Ona maficha Ona kupiwa
SouiWzi Light Board... Ona maficha Ona kupiwa
Creality Halot One... Ona maficha Ona kupiwa
Obelinrp Chiedza Board... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	MOVKZACV 3D Printer...
Unhu hwemutengo	SouiWzi Light Board...
Chatinoda	Creality Halot One...
Obelinrp Chiedza Board...
ELEGOO 2 PCS Plastiki... Ona maficha Ona kupiwa
ELEGOO 2PCS Metal... Ona maficha Ona kupiwa
Creality Resin Tangi... Ona maficha Ona kupiwa
Sovol Tanques de resina... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	ELEGOO 2 PCS Plastiki...
Unhu hwemutengo	ELEGOO 2PCS Metal...
Chatinoda	Creality Resin Tangi...
Zvimwe zvekushandisa uye zvishandiso
Vhara Nozzle Cutter Kit
Matipi zvemesses mune extrusion nozzle, kubvisa zvipingamupinyi kana magwamba anobvira efilament yakaomeswa inogona kunge ichivharira kubuda.
SIENOC Power Drill Kit... Ona maficha Ona kupiwa
Vbestlife Needle... Ona maficha Ona kupiwa
Voarge Power Drill Kit... Ona maficha Ona kupiwa
Sunreek - Seti yemazano... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	SIENOC Power Drill Kit...
Unhu hwemutengo	Vbestlife Needle...
Chatinoda	Voarge Power Drill Kit...
Sunreek - Seti yemazano...
Kubvisa uye kuchenesa mudziyo kit
Seti yezvishandiso zvinokubatsira iwe nemabasa e kuchenesa, kubviswa kwezvikamu, uye kugadzirisa ye 3D printer yako.
SOOWAY 36pcs Kit... Ona maficha Ona kupiwa
42PCS Printer Kit... Ona maficha Ona kupiwa
Voarge Printer Nozzle... Ona maficha Ona kupiwa
SOOWAY... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	SOOWAY 36pcs Kit...
Unhu hwemutengo	42PCS Printer Kit...
Chatinoda	Voarge Printer Nozzle...
Kiti yemafunnels uye mafirita eresin
Kit ye funnels uye mafirita kudira resin uye bvisa zvimedu zvakasimba. Vachakubatsirai mose kuiisa mumadhipoziti anodhinda uye kuidzosera kuchikepe kana muchida kuichengeta.
ManLee 102pcs Mvura Sefa... Ona maficha Ona kupiwa
Sovol Resin Sefa... Ona maficha Ona kupiwa
Sovol 3d Printer Resin... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	JOREST 7 Pieces Printer...
Unhu hwemutengo	ManLee 102pcs Mvura Sefa...
Chatinoda	Sovol Resin Sefa...
Dry uye yakachengeteka filament kuchengetedza
Iwe unogona kuwana vacuum mabhegi ekuchengetedza mafilaments pasina hunyoro kana guruva kana uine akati wandei spools uye. haungazvishandise kwenguva refu. Kana iri resin, nzira yakanakisa yekuichengeta iri muhari yayo.
eSUN Vacuum Kit, gumi... Ona maficha Ona kupiwa
SOOWAY 10 Piezas... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	eSUN Vacuum Kit, gumi...
Unhu hwemutengo	eSUN Vacuum Kit, gumi...
Chatinoda	SOOWAY 10 Piezas...
eSUN Vacuum Kit, gumi...
Kune rumwe rutivi, humidity inogona kukanganisa filaments 3D kudhinda. Ichi ndicho chikonzero mabhokisi ekuomesa anotengeswa achadzorera "hutano" hwakanaka hwemafilaments ako, nokudaro kuchengetedza filament yakanyorova.
Dryer box ye... Ona maficha Ona kupiwa
eSUN eBox Lite Box... Ona maficha Ona kupiwa
SUNLU Dryer bhokisi... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	Dryer box ye...
Unhu hwemutengo	eSUN eBox Lite Box...
Chatinoda	Dryer box ye...
SUNLU Dryer bhokisi...
Kugadziriswa kwe3D printers
Calibration. Munyori: Stemfie3D
Calibration. Munyori: paulo@kiefe.com
Lubrication. Munyori: paulo@kiefe.com
Chikamu chakakundikana nekuda kwekusagadzirisa zvakanaka uye kuseta
Kudzivirira kunogara kuri nani pane kugadzirisa. Ndiko kusaka zvakakosha ita zvakanaka kugadzirisa michina yekudhinda ye3D. Nekugadzirisa kwakakwana, kuputsika kwezvikamu uye kuora kwavo kunogona kunonoka, kunze kwekudzivirira mamwe matambudziko. Muchidimbu, kuedza kuchengetedza 3D printer kunoshandura mukubudirira kukuru uye kuchengetedza kwemari mukufamba kwenguva.
* ZVINOKOSHAOngorora: Gara uchiverenga bhuku rauya neprinta ye3D kuti ubate zvakanaka uye ugadzirise. Kana iwe usina bhuku iri, dhawunirodha iyo PDF vhezheni pane yepamutemo webhusaiti yemugadziri wemodhi yako. Iwe unofanirwa kuita mabasa mazhinji ne 3D printer yakadzimwa uye isina plug kuti udzivise electrocution, uye mumamiriro ezvinhu apo izvi hazvigoneke, senge kana extruder ichifanira kupisa, chenjera kuti urege kuzvipisa.
Kuenzana kana Calibration yemubhedha
Chengetedza mubhedha chinhu chinokosha. Zvinofanira kuitwa nguva nenguva. Mamwe maprinta e3D anosanganisira otomatiki kana semi-otomatiki kuenzana (kubva pane yekudzora menyu yeprinta pachayo), saka unozodzivirira kuzviita nemaoko. Asi mumamiriro ezvinhu apo isina kubatanidzwa, iwe uchafanirwa kuigadzirisa nemaoko kuti udzivise kudonha, majasi ekutanga asina kuenzana, kana kusanamatira zvakanaka.
Izvo zvakakosha kuti usati waisa chiyero iwe uve nechokwadi chekuti pamusoro pemubhedha wakachena kwazvo, uye pese paunokwanisa zviri nani kuita kupisa kuenzana. Nenzira iyi, ichange iri pakushisa kwekudhinda uye iwe uchadzivirira kuti isakanganiswa nekuwedzera kwezvinhu. Kunyangwe, kazhinji, hauzocherechedze mutsauko wakawanda pakati pekutonhora kana kupisa calibration.
For the manual leveling Iwe unofanirwa kushandisa mavhiri kana gadziriso screws ayo maprinta anowanzo kuve nawo pachigadziko. Zvinongodiwa chete kuvaendesa kune rumwe rutivi kana rumwe kusimudza kana kuderedza makona uye kuisiya iyo nhanho. Ziva kuti iwe unofanirwa kunongedzera mapoinzi mashanu, makona mana uye nepakati. Uye kana, semuenzaniso, iwo akaturikidzana ari 5 mm, kureba pakati peiyo extruder nozzle uye mubhedha panzvimbo dzese kunofanirwa kunge kuri pakati pe0.2 uye 0.1 mm.
Vamwe vashandisi vanoshandisa hunyengeri yekuenzanisa, uye ndiko kuisa printer kuti idhinde chinhu uye kuderedza kasi kusvika pakakwirira paunenge uchidhinda yekutanga. Uye panguva yekuita, vanotarisa hukobvu husina kuenzana hwechigadziko uye vanoyera mubhedha nemaoko kusvikira wasvika.
Rangarira kudzikamisa mubhedha kanokwana kamwe mushure mekuvandudzwa kwehardware, pakutanga kwekutanga, kana uchishandisa yakakwirira shrinkage zvinhu zvakadai senylon kana polycarbonate, kana pakuisa mapepa ePEI.
Izvi zvinogona zvakare kuitwa uchishandisa mamwe mabasa eprinta pachayo zviri nyore, kana nemaoko. Dzimwe nguva kuenzanisa kwakashata haisi nyaya yezvirongwa, asi ye XYZ mbezo nematambudziko kana kupfeka, saka ivo vachada kutsiviwa. Kuti utarise calibration, unogona dhawunirodha calibration cube woiprinda kuti uone zvabuda.
Chengetedza kunamatira kwakanaka
La first layer zvinotapura chikamu chasara chiri kudhindwa. Mukuwedzera, kana pasina kunamatira kwakanaka, vanogona kuvharwa kana kutamiswa panguva yekudhinda, zvichiita kuti pave nekukanganiswa (kunyanya muzvinhu zvakadai seABS). Naizvozvo, iyo pamusoro inofanira kuva yakachena sezvinobvira:
Kudzima guruva, organic mafuta kubva paganda redu patinobata mubhedha, uye kuunganidza tsvina ne microfiber kana jira rekotoni. Unogona kushandisa kuchenesa doro senge IPA pamibhedha yakagadzirwa negirazi.
Kana uchishandisa zvinonamirwa kana matepi Kuti uvandudze kunamatira kwemubhedha, panogona kunge paine zvakasara zveglue zvaunofanira kukwesha uye wogeza nesipo nemvura mudhishi (kubvisa mubhedha kubva ku3D printer). Zvakare, iwe unofanirwa kutsiva iyo yekunamatira kana paine chero kukanganisa kunogona kukanganisa yekutanga layer.
Nguva yeBelt Tension Adjustment
Mazhinji maprinta epamusha e3D anoshandisa mabhandi enguva pane angangoita 2 axes. Aya tambo akareruka uye anobvumira kufamba kwakanaka. Zvisinei, kuti kufamba uku kuve kwakakwana vanofanira kuomesa nguva nenguva kudzivirira matambudziko:
loose: Kana yanyanya kusununguka inogona kuparara uye kupfeka mazino, pamwe chete haizopinduri nekukurumidza kune kamwe-kamwe shanduko mukukurumidza uye kutungamira, iyo inokanganisa kunaka kwechikamu.
Moto muzhinji: Ichaita kuti iparadze (kunyangwe yakawanda yakagadzirwa nerabha uye yakasimbiswa nefiberglass kana simbi) kana kumanikidza zvimwe zvikamu, senge mabearings kana pulleys, kunze kwekumanikidza mota zvakanyanya. Uye izvi zvinogona zvakare kutungamira kune akaturikidzana kuremara, zvimiro zvisina kurongeka, nezvimwe.
Kuti uzvirovereredze nemazvo, tevera bhuku remuenzaniso wako. Ivo vanowanzova neyakavakwa mubhandi tensioner iri nyore kwazvo kushandisa. unotofanira kudaro simbisa sikuruu kuti muite izvi, muine rimwe patambo imwe neimwe.
Izvo zvakakosha kwazvo izvo usashandise zvigadzirwa zvakaita se3 mu1, nyora WD-40 uye zvakafanana, sezvo izvi zvisingazongozorebesa printer yako nemazvo, asi zvinogonawo kubvisa chero mafuta asara.
Pane marudzi akawanda akasiyana-siyana emafuta nemafuta, ita shuwa kuti ndiyo inokurudzirwa nemugadziri weprinta yako ye3D, sezvo panogona kunge paine zviri nani pane vamwe. Mamwe eanonyanya kufarirwa anowanzo kushandisa chena lithium girizi, yakaoma lubricant senge mamwe anobva pasilicone kana Teflon, nezvimwe.
Iyo yekuzora kana yekuzora maitiro inofanirwa kuve shandisa kune zvikamu zvinofamba zvinozvida, nekudaro kudzivirira kupisa kwemamota nekuda kwekukweshana, kusakwana kwepamusoro mukudhinda, kana ruzha:
Tsvimbo dzine mabearings kana linear bearings
njanji kana njanji
Z axis screws
Kana wapedza nguva yakareba usina kuzora zvinhu zvawo, zvinokwanisika kuti uchafanira kutsiva zvimwe zvikamu nekuti zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Icho chimwe chezvikamu zvakakosha uye, pasinei naizvozvo, inowanzoregeredzwa kusvikira yavharwa. Iyo extruder nozzle inofanirawo kuva chenesa usati watanga kudhinda. Izvi zvichabvisa zvisaririra zvefilament yakasimba iyo yakanamira uye iyo inogona kukanganisa kudhinda mune ramangwana. Nokuda kweizvi unogona kushandisa bhobho yekuchenesa kit kana kuchenesa filament.
Ngwarira paunenge uchishandisa mabhurashi esimbi nemimwe midziyo, sezvo kubata mamwe magetsi eiyo 3D printa kunogona kupfupika uye kukuvadza mamaboard.
Vamwe recommendations Ndizvo:
Unogonawo kunge wakazviona mamwe mafilament 3D printers "drool" zvishoma usati watanga kudhinda. Kureva kuti vanodonhedza shinda yeshinda yakanyungudutswa yaunofanira kubvisa pachikuva isati yanamira uye inogona kudimburira chikamu chekutanga chechikamu chichadhindwa.
ari kunze grout mavara akakoshawo. Haisi nyaya yekunaka, ndeye kudzivirira muromo kubva pakuipa kana kamuri kubva pakatanga kunhuwa epurasitiki yakatsva. Kuti ucheneswe kwakakodzera, kupisa iyo extruder uye ipapo iwe unofanirwa kukwesha nebhurasho rebristle kubva pakuchenesa kit. Iwe unogona zvakare kushandisa rubatsiro rwema tweezers kana jira gobvu, uchichenjerera kuti urege kuzvipisa.
Uyewo chenesa chivharo chekupisa.
Kana uchifungidzira kuti iripo chipingamupinyi, iwe unofanirwa kuita inotonhora kudhirowa, kana uchikwanisa. Kana zvisiri, unogona kushandisa yakakwirira tembiricha filament akadai ABS kana PETG kuedza unclog, kana chaiwo yokuchenesa filaments iripo pamusika. Kuti udzivise nyaya dzejamu idzi, gara uchiyeuka kuseta tembiricha yakakodzera ye fusing yezvinhu zviri kushandiswa.
Nekuda kwekugadzirisa uku iwe uchakwanisa kudzivirira kudonha kwemafilament, zviyo zvepamusoro muzvikamu zvakadhindwa, zvivharidzo, suppuration, uye zvakare. zvinetso senge underextrusion kana overextrusion.
Iyo filament inofanirawo kuchengetedzwa zvakanaka, kana kuti, inofanira kuva zvakachengetedzwa zvakanaka. Humidity neguruva ndizvo zviviri zvezvinhu zvinonyanya kukanganisa filament. Kusachengetedzwa zvakanaka kwefilament kunogona kukonzera kuvharika kwemuromo, suppuration, kuwedzera kukweshana mumachubhu ayo filament inofamba, uye kutsemuka nekuda kwekunyorova.
Kuti uite izvi, unogona kushandisa mabhokisi ekuomesa uye mabhegi ekutsvaira ataurwa pamusoro apa, pamwe nekushandiswa kwemakamuri ane mafirita emhepo kune yako 3D printer.
Nguva nenguva inofanirwa tsiva nozzle ye extrusion ye 3D printer yako. Dambudziko risina resin, kunyange zvazvo mamwe aya aine zvimwe zvinokanganisa sekuchinja magetsi. Dzimwe nguva kutarisa kuti grout inoda kutsiva iri nyore sekutarisa kutaridzika kwayo, sezvo inenge yarasikirwa nemuvara wayo wepakutanga uye icharatidza mavara kana kuparara kwepamusoro.
Izvo zvinoenderana nekushandiswa, kunyangwe kana kushandiswa kuchiwanzo, zvinokurudzirwa kuchinje mwedzi mitatu kana mitanhatu yega yega. Kana chete PLA ichishandiswa, kusimba kwezvikamu izvi kunowanzo kureba.
Rangarira iwe unogona kuwana mhando mbiri ye nozzles:
Brass: Iwo akachipa zvakanyanya uye akanaka kune asiri-abrasive filaments, akadai sePLA neABS.
Yakaomeswa simbi: ndiyo yakanakisa sarudzo kune mamwe akawanda abrasive komisheni, kunonoka kudiwa kwekuchinja muromo.
Kutsiva nozzle iyi ndizvo nyore sekusunungura iripo uye nekukoira itsva pamusoro weextrusion. Chokwadi, dzinofanira kuwirirana.
Ipfungwa yakanaka nguva dzose chenesa mubhedha wekudhinda nemucheka wekotoni mushure mekupedza kudhindwa kwega. Kupfuudza jira kuchave kwakakwana, kunyangwe panogona kunge paine zviitiko umo mavara kana mamaki angasara. Muchiitiko ichocho, unogona kushandisa pedhi yekutsvaira kana chipanje uye kushandisa sipo nemvura, uchibvisa mubhedha kuti usanyorovesa 3D printer. Usati wadzorera mubhedha, iva nechokwadi chokuti yakaoma.
Kucheneswa kwekunze (zvakawanda)
Kana iwe uchizochenesa zvikamu zvekunze zveprinta, shandisa a microfiber kana jira rekotoni lint-free. Iwe unogona kushandisa chigadzirwa chekuchenesa pane izvi, asi ita shuwa kuti kana iri polycarbonate kana acrylic nzvimbo, senge zvivharo zveSLA, LCD uye DLP mhando maprinta, kuti usashandise zvigadzirwa nedoro kana ammonia, nekuti zvinokuvadza surfaces.
Rudzi urwu rwekuchenesa yakakosha kudzivirira tsvina kuti isaunganidzwe panjanji kana zvimwe zvikamu uye kukonzera kupisa, kufamba kusiri kwakarurama, kukanganiswa kwechikamu, kutenheka uye ruzha rusinganzwisisike pakudhinda.
Chenesa zvisingaonekwi Izvo zvakakoshawo pakuchengetedza kwakanaka. Zvimwe zvinhu zvakavanzika, senge mabhodhi emagetsi, mafeni uye heatsinks, zviteshi, nezvimwe, zvinogona kuunganidza guruva netsvina yakawanda, zvichikonzera matambudziko akajairika senge:
Kutonhora kwakashata nekuda kwekuti mafeni haatendeuke zvakanaka nekuda kwetsvina pashaft kana mabearings. Uye kunyangwe iyo sink yakavharwa.
Masumbu anogona kugadzira matambudziko edunhu mapfupi mune zvemagetsi masisitimu. Inogona zvakare kuunganidza hunyoro kubva kune organic zvinhu muvhu uye kukuvadza bhodhi remagetsi.
Kuvaka pamagiya nemamotor kudzivirira kushanda zvakanaka.
Para nzvenga, zviri nyore sekushandisa bhurashi diki, bhurashi repende kana bhurashi uye kuchenesa pamusoro pezvikamu izvi. Iwe unogona zvakare kushandisa diki vacuum cleaner uye kunyangwe CO2 pfapfaidzo kuchenesa nzvimbo dzisingasvikike.
Panyaya yemavara eresin kana mavara eresin, haugone kushandisa mvura kana chero yekuchenesa imba kuti ubvise. Kuchenesa unogona kushandisa a microfiber kana jira rekotoni kuchenesa ndiro. Uye kana iri tsvina inoramba iripo, shandisa imwe isopropyl doro kunyura jira.
Gadziridza 3D printer firmware
Uye chekupedzisira asi chisiri chidiki, iwe unofanirwa zvakare tarisa kuti firmware yeprinta yako ye3D inoenderana. Kana usina yazvino vhezheni, unofanira kugadzirisa iyi. Vazhinji vagadziri veprinta vanozivikanwa vanowanzoburitsa zvinoburitswa yega yega 6 mwedzi kana zvakadaro.
Izvi zvigadziriso zvinogona kuuya kumwe kugadzirisa akadai se:
Kugadziriswa kweBug kubva kune dzakapfuura shanduro
Kuita kuri nani
Kuti uvandudze firmware ye 3D printer yako, iwe uchada:
A PC kubva kwaunotora uye kuisa iyo firmware update.
Dhawunirodha uye isa Arduino IDE, kana yako 3D printer yakavakirwa paArduino board.
USB tambo yekubatanidza printer uye PC.
Iva neruzivo rwehunyanzvi rweprinta yako ye3D iri padyo (mm yeXYZ steppers uye extruders, yakakura axis yekufamba chinhambwe, chiyero chekudyisa, kukwirisa kwakanyanya, nezvimwewo).
Iyo faira yakatorwa neiyo nyowani firmware vhezheni. Izvo zvinoenderana nerudzi rwako uye modhi yeprinta. Iwe unofanirwa kutsvaga iyo chaiyo, asi gara uchirodha kubva kune zviri pamutemo saiti, kwete wechitatu bato mawebhusaiti.
hezvino zvimwe zvinongedzo zvekufarira kune akasiyana software yekuvandudza uye firmware:
Nhungamiro yekuongorora uye kugadzirisa zvakajairika 3D printer matambudziko
Kunyangwe kugadzirisa kwakakwana kunoitwa, nekukurumidza kana gare gare masisitimu anotadza kana kuputsika uye ndipo paunofanira kuziva nzira yekuongorora matambudziko uye kugadzirisa yako 3D printer. Saizvozvo, iwe unofanirwa kuyeuka kuti SLA haina kufanana neDLP, kana mamwe marudzi etekinoroji. Chimwe nechimwe chine matambudziko acho. Pano matambudziko anowanzogadziriswa anorapwa, mazhinji acho efilament kana resin anodhinda ekushandisa mudzimba, ayo akanyanya kupararira.
*ONA: Iwe unofanirwa chete kuenderera nekugadzirisa kana uchinyatsoziva zvauri kuita. Funga nezve waranti yemidziyo yako, nekuti kana ukaikanganisa iwe unogona kurasikirwa newaranti yakataurwa. Rangarira kugara uchidzima nekuburitsa printa yako kudzivirira kuvhundutswa nemagetsi, pamwe nekuita shuwa kuti kwatonhora kudzivirira kutsva. Ehe, kana iwe uchizobata resin, tinokupa zano kuti upfeke magirazi ekudzivirira, mask yezvinobvira mhute, uye latex magurovhosi.
Sei printa yangu ye3D isiri kudhinda?
Dambudziko iri nderimwe rakawanda zvinogona kukonzera ine, sezvo inogona kunge iri chero chinhu. Tapota tarisa zvinotevera:
Tarisa kuti printer yakaiswa uye yakabatana nemazvo.
Tarisa kuti simba reprinta rakarurama here uye kuti rakabatidzwa.
Une filament here? Chimwe chezvikonzero zvisina musoro kazhinji kushaikwa kwefilament. Rodha patsva filament woedza zvakare.
Kana paine filament, edza kusunda nemaoko filament. Dzimwe nguva panogona kunge paine dambudziko renzvimbo yechubhu iyo isingapfuure zvakanaka uye iyo simba inokwana kupfuura iyo nzvimbo.
Tarisa zvakare kuti uone kana iyo filament feed mota iri kutendeuka uye push gear iri kutendeuka.
Tarisa paprinter skrini kuti uone kana paine ruzivo runobatsira kana kodhi yekukanganisa kuti uone zvazvinoreva.
Iyo muromo iri pachinhambwe chisina kufanira kubva pamubhedha
Kana muromo uri padyo nemubhedha kuti usaburitse purasitiki yakawedzera, sekunge muromo uri kure uye unodhinda chaizvo mumhepo., idambudziko rekugadzirisa mubhedha. Iwe unogona kuona chikamu chekugadzirisa pane leveling kuti uigadzirise.
Zvikamu zvakarumwa kana zvisipo
Mapurinda akachipa anowanzo shandisa a giya remazino kusunda filament ichienda mberi nekudzoka, asi magiya aya anogona kunge achikuvadza filament sezvaanoenda, uye kunyange kuacheka. Zvadaro:
Iva nechokwadi chekutarisa giya rekuruma kwakaringana, kana kuve nechokwadi chekuti giya harina kubvarurwa kana kubvaruka.
Filament kutungamira system ine matambudziko. Tarisa:
Direct Extruder - Iyo mota pulley inogona kunge isiri kushanda uye inoda kutsiviwa, kana mazino egiya anogona kunge akapfekwa uye anoda kutsiviwa. Zvingave zvakare kuti iyo cam haisi kumanikidza zvakakwana.
Bowden: Izvi zvinogona kunge zviri nekuti screws dzinosimbisa filament dzakanyanya kusununguka, kana fanidzo inosundira filament haitenderere zvakanaka. Simbisa mabhaudhi kana kutsiva fani.
Kusakafanira extrusion tembiricha yezvinhu zvinoshandiswa.
Extrusion speed yakawandisa, edza kuideredza.
Shandisa dhayamita diki muromo pane iyo yakagadziridzwa mumasetin'i ekudhinda.
Printer inosiya chikamu chakadhindwa chiri pakati
Paunenge uchidhinda chikamu uye 3D printer inomira pakati pekudhinda, pasina kupedzisa chidimbu, inogona kuve nekuda kwe:
Pakanga pane kudzimwa kwemagetsi panguva yaidhindwa.
Yakakuvadzwa PTFE chubhu inozofanirwa kutsiviwa.
Bitten filament (ona chikamu chakatsaurirwa kune dambudziko iri).
Engine overheating. Mamwe maprinta ane masisitimu anomisa maitiro kudzivirira huipi hukuru.
Kudzikira kwakaderera mu extruder. Edza kudzvanya filament inopesana nemota, kana kuti kamera iri kuita kumanikidza chaiko.
Zvidiki-diki hazvina kudhindwa
Chikamu chinodhinda zvakanaka, asi zvinyorwa zvidiki zvisipo, hazvina kudhindwa. Dambudziko iri rinogona kukonzerwa ne:
Nozzle diameter yakakurisa. Shandisa imwe ine dhayamita diki. Ziva kuti kugadzirisa kunowanzo 80% yedhayamita yemhino zvakanyanya.
Ita shuwa kuti software yacho yakarongedzwa nemazvo kune dhayamita yemuromo wauri kushandisa. Panogona kunge paine kusawirirana. Iwe unogona kutoisa muromo wakadzikira zvishoma pane wawakaisa kuti "kunyengera" printer.
Kutadza kunamatira kwechidimbu
When the chidimbu hachinamati pamubhedha, tembiricha yemubhedha inogona kunge isina kunaka, kana zvinhu zvemubhedha kana zvinhu zviri kushandiswa pakudhinda zvinogona kunge zvisiri izvo. Zvimwe zvikonzero zvinobvira ndezvi:
Nozzle kure zvakanyanya kubva pamubhedha. Rongedza urefu.
First layer kudhinda nekukasira. Dzora.
Kana iwe uine layer yekufefetera, inogona kunge iri kutonhodza layer yekutanga nekukasira uye ichikonzera dambudziko iri.
Tembiricha yemubhedha haina kukwana, isa tembiricha chaiyo yezvinhu zvauri kushandisa.
Iwe uri kudhinda nechinhu chinoda mubhedha unopisa uye hauna chigadziko chinopisa. (unogona kuisa yekunze)
Kushaikwa kweBrim, izvo zvimbi zvinogadzirwa kana pamusoro peiyo yakadhindwa nhamba yakanyanya kudiki. Izvi zvimbi zvinonatsiridza kubata. Iwe unogonawo kugadzira raft, kana chigadziko chakadhindwa pasi pechidimbu.
Makomba asina kuzadzwa muchikamu chekupedzisira
Paunoona magapu asina chinhu, sezvikamu zvisina kunyatsozadzwa, asi zvinongobata iyo yekupedzisira layer, saka:
Inogona kunge iri nekuda kwe underextrusion (ona pazasi).
Nekuda kwekuperevedza kwezvikamu mukupedzisa. Iwe unozofanirwa kushandisa mamwe ma layer mukugadzira kwako.
Kuzadza kwakaderera (%). Zvirongwa zvakaderera dzimwe nguva zvinoshandiswa kuchengetedza filament, asi zvinokonzeresa dambudziko iri.
Tarisa kuti hauna kushandisa muzinga wehuchi pamuenzaniso.
Zvisina kuzadzwa voids muzvikamu kana zvikamu zvitete zvechikamu
When purasitiki inoshaikwa pamadziro kana zvikamu zvitete zvekamuri yako, zvichida nekuda kwe:
Zvisina kugadziridzwa gap fill settings. Wedzera kukosha kwekuzadza kuvandudza kupedzisa.
Perimita yakafara idiki zvakanyanya. Wedzera hurefu hwemaperimita mune yako printer marongero. Kukosha kwakakodzera kune akawanda laminators kazhinji kuisa chiyero chakafanana nehupamhi hwemuromo, semuenzaniso, kana uine 1.75 mm, isa 1.75.
Extruder mota yakawedzera kupisa
Iyi mota inoshanda zvakanyanya panguva yekudhinda, ichigara ichisundidzira filament kumashure nekudzoka. Izvi zvinoita kuti zvipise, uye dzimwe nguva inogona kupisa zvakanyanya, kunyanya kana magetsi asina maitiro ekudzivirira rudzi urwu rwedambudziko.
Vamwe vatyairi vemotokari kazhinji vane thermal cut-off system yekuvhiringidza simba kana tembiricha yakanyanya. Izvo zvichaita kuti X uye Y axis motors dzitenderere uye kufambisa muromo kana extruder musoro, asi iyo extruder mota haifambe zvachose, saka haichadhindiki chero chinhu.
Tarisa iyo firiji uye feni muchikamu chino, uye bvumira nguva shoma kuti mota itonhorere pasi. Mamwe maprinta ane otomatiki masisitimu anodzima printer kuti itonhorere pasi uye kudzivirira imwe kukuvara.
Warping kana deformation: zvikonzero uye mhinduro
Dambudziko iri rinozivikanwa zviri nyore, sezvo iri iyo iyo nhamba inoda kukanganisa uye dzine makona akakombama kana kuti asina kushapa mushure mekudhinda. Dambudziko iri rinowanzo kukonzerwa nekusiyana kwekushisa panguva yekugadzira maitiro kunokonzerwa neiyo isiriyo tembiricha yekumisikidza, kana yekudziya system.
Zvinowanzoitika kakawanda muABS, kunyange zvazvo inogona kugadziriswa kushandisa ABS +. Kana iwe uchizoshandisa yakajairwa ABS, iwe unofanirwa kufunga nezve kushandisa inogadzirisa senge 3DLac, uye zvakare kugadzira Brim yakatenderedza chidimbu, iyo mhando yemapapiro ekutsigira anozobviswa gare gare.
Tarisa zvakare kuti hapana inotonhora dhizaini muimba, sezvo izvi zvinogona kuita kuti filament isimbise nokukurumidza uye zvinhu zvidzore kubva pamubhedha.
3D printer kugadzirisa netambo kana fraying
El kuputika kana tambo dzinoshungurudza Mitsetse yeshinda inonamira pamufananidzo nderimwe dambudziko rinowanzoitika. Zvinowanzoitika nekuda kwekutadza kugadzirisa kwekugadzirisa, tembiricha, kusakwana kudzoka, kana rudzi rwefilament. Kana iwe wakamboshandisa inopisa glue pfuti, unenge waona kuti tambo idzi dzinowanzogara, uye chimwe chinhu chakafanana chinoitika mumaprinta e3D.
Para gadzirisa dambudziko iri, tarisa kuti kudzosa kuri kushanda here, kuti kureba kureba kwakaringana uye kuti kumhanya kwekudzoka kwakaruramawo. Nezvinhu zvakadai seABS nePLA, kukurumidza kudzosa kwe40-60mm/s, uye madaro e0.5-1mm nokuda kwekubuda kwakananga, kazhinji kwakanaka. Panyaya yeBowden type extruders, zvino inofanira kudzikiswa kusvika pakumhanya kwe30-50 mm/s uye madaro e2 mm. Iko hakuna mutemo chaiwo, saka uchafanirwa kuedza kusvika wauwana zvakanaka.
Tarisa izvo kumhanya uye tembiricha zve fusion vari akakodzera zvinhu zvauri kushandisa, uye kuti tambo hadzina kunyorova. Izvi zvinogonawo kukonzera matambudziko akadaro, kunyanya kana tembiricha yakanyanya.
Kune rimwe divi, zvinogona zvakare kuve nekuda kwe kufamba kwemusoro yakakura kwazvo. Mamwe maprinta ane zvinhu zvakadai Dzivisa Kuyambuka Perimeters kudzivirira kuyambuka nzvimbo dzakavhurika nekusiya shinda idzi, inova sarudzo kana ikagoneswa.
Iyo muromo yakavharwa
ari mhuno dzinowanzovharika, uye ndeimwe yeanonyanya kutsamwisa uye anogara achinetsa muFDM mhando 3D maprinta. Inowanzoonekwa nezwi rinoshamisa mumusoro weextrusion uye kamwe kamwe filament inomira kubuda mumuromo.
ari zvikonzero zvinogoneka uye mhinduro Ndizvo:
Hunhu husina kunaka hwefilament, saka unofanirwa kuyedza imwe mhando iri nani filament.
Tembiricha yeextrusion isiriyo. Tarisa kuti hotend thermistor iripo uye kuti tembiricha yekuseta ndeyechokwadi.
Defective filament segment. Dhonza filament, cheka anenge 20-30cm kuti ubvise chikamu chedambudziko, uye wozorodha zvakare. Ringavewo zano rakanaka kumhanyisa tsono kana kubaya muromo kuti uchenese muromo.
Kana iwe ukashanda munzvimbo dzine guruva rakawanda, rakadai seimba yekuchengetera indasitiri, musangano, nezvimwewo, unofanirwa kushandisa Oiler, ndiko kuti, chipanje chine mafuta mashoma kuchenesa filament isati yasvika kune extruder.
Layer shifting kana layer displacement
Zvinowanzoitika nekuda kwe a displacement mune imwe yezvikamu pa X kana Y axis.
Iyo hotend iri kufamba zvakanyanya uye mota inoshaya matanho. Speed ​​down.
Mitemo yekumhanyisa isiriyo. Kana iwe wakakanganisa neiyo firmware acceleration values, unogona kunge wakapinda zvisiri izvo. Kugadzirisa izvi zvinogona kuita zvishoma, uye iwe unofanirwa kutarisa nemutengesi wako wemidziyo.
Mechanical kana dambudziko remagetsi, senge matambudziko mukunetsana kwemabhandi ane mazino, kana matambudziko mukudzora madhiraivha. and injini. Kana iwe uchangobva kutsiva vatyairi uye kubva ipapo kupuruzira kwatanga, unogona kunge usina kusarudza iyo mA chaiyo.
Paunoona tsvina yepurasitiki kana smears pamusoro pechinhu, sekunge zvidimbu zvidiki zvakanamira pachidimbu, zvinogona kuve nekuda kwezvikonzero zviviri:
Yakanyanya extrusion tembiricha inokonzera kudonha kana kudonha pachikamu uye inosiya izvi zvakawandisa. Isa tembiricha yakakodzera yezvinhu zvakashandiswa.
Wrong filament retraction setting.
Plastiki yakawandisa nenzira yekudonha
Ukaona kuti chidimbu chine zvimwe kuwandisa kwepurasitiki pamusoro uye izvi zvakawandisa zviri muchimiro chemadonhwe (smudges ane mamwe maumbirwo echaotic), iwe unofanirwa kutarisa iyo extruder kana inopisa zvinhu, sezvo ingangove yakasununguka:
Nozzle yakarukwa zvisina kunaka (mamwe maaruminiyamu kana mhungu yendarira haigamuchire kuomeswa zvakanyanya kana kubviswa nekuda kwezvinhu zvinyoro).
Tsvimbo haina kusimbiswa zvakanaka.
Iwe uchaona mamwe mamark like makwara kana mikororo pamusoro pechinhu. Muchiitiko ichi, zvinokwanisika kuti muromo kana muromo uri kukwesha nekuda kwe:
Homming Z haina kunyatsogadziriswa, uye muromo uri padyo zvakanyanya.
Overextrusion (ona zvikamu zvinotevera).
Kana iyo extrusion iri pasi peyakajairika, haina kuwedzera zvakakwana filament, dambudziko rinogadzirwa muzvimedu, pasina kuzadza maperimita zvakanaka kana kuti dzinobuda nenzvimbo pakati pematanho uye kusakwana. Zvikonzero zvedambudziko iri uye mhinduro ndezvi:
Wrong filament diameter. Ita shuwa kuti uri kushandisa iyo chaiyo filament yeprinta yako (1.75mm, 2.85mm, 3mm,…).
Inowedzera extruder multiplier parameter (extrision multiplier). Izvi zvinokwanisa kusiyanisa huwandu hwezvinhu zvakawedzerwa. Semuenzaniso, kana iwe ukaenda kubva kune kukosha 1 kusvika 1.05, iwe unenge uchiwedzera 5% zvimwe. PaPLA 0.9 inokurudzirwa, yeABS 1.0.
Una extrusion yakawandisa inoburitsa filament yakawandisa, zvichiita kuti layer iitewo matambudziko uye ibudise mibairo isina kunaka zvachose. Iwe unozonyanya kuona kuti kumusoro kwechidimbu kune yakawedzera plastiki. Izvo zvinokonzeresa zvinogona kunge zvakafanana neizvo zve underextrusion, asi ne parameter kukosha kune yakatarisana yakanyanyisa (ona chikamu chakapfuura uye gadzirisa ma parameter kumashure, ndiko kuti, kudzikisa kukosha panzvimbo yekuisimudza).
Vamwe extruders vane matambudziko nazvo kudonha kwepurasitiki padzinochengetwa patembiricha yakakwira, sezvo purasitiki yakanyungudutswa inoramba iri mukati memadhaivhi uye nozzle ichiita kunge ichidonha. Izvi zvinoda kudzikiswa kana kuti kucheneswa kwemhuno kudzivirira iyo yakawandisa kubva mukukuvadza kudhinda. Mhinduro iri nyore ndeyekuchenesa muromo zvakanaka usati wadhinda kubvisa chero tsvina inogona kusara mukati.
Kune mamwe maprinta ane zvirongwa kana mabasa zvakanangana nazvo. Vamwe vanosarudza kuedza kudhinda denderedzwa rakatenderedza chikamu kuti vabvise mapurasitiki ese.
Kana ukaona kuti chidimbu chine inorira kumativi, uye izvo zvinodzokororwa mukati mechimiro chese chechinhu, zvino zvinogona kunge zvichikonzerwa nekusununguka kana kufamba kwemutsara kusina kutwasanuka paakisi Z. Unogona kutarisa mamiriro eakisi ataurwa kana tsvimbo, tarisa kuti akatwasuka here, kuti ivo vanonyanya kutarisana nemagetsi, kuti nuts uye mabhoti zvakanyatsogadziriswa.
Kupisa muzvikamu zvakadhindwa
Kana chikamu chakadhindwa chine mashoko ari vanopisa zvakanyanya uye purasitiki inonyunguduka uye inokanganisa, zvino zvinogona kunge zvichikonzerwa ne:
Kusakwana layer yekutonhodza. Simudzira kutonhora kana wedzera imwe yekutonhodza system.
Tembiricha yakawandisa. Seta tembiricha yeextrusion chaiyo yezvinhu zvauri kushandisa.
Anodhinda nekukurumidza. Dzikisa kumhanya kwekudhinda.
Kana pasina chimwe chezviri pamusoro chashanda, unogona kuedza kudhinda zvidimbu zvakawanda panguva imwe chete. Izvi zvinobvumira nguva yakawanda kuti zvidimbu zvitonhore pasi.
Delamination mukurapa resin
La delamination kana ikaitika mu resin 3D printa imhaka yezvimwe zvikonzero kunze kweku delamination mumafilament printers. Iri rudzi rwedambudziko rinokonzera kuti akapora akapatsanurwa kubva kune mumwe nemumwe, kana yakaomeswa resin inoramba ichiyangarara mutangi resin. Pakati pezvikonzero zvinowanzoitika:
Matambudziko nemafambiro kana kurongeka kwemuenzaniso kana matambudziko ane zvinotsigira.
Kudhinda kwambomira kweinopfuura awa.
Old resin tank inoda kutsiviwa.
Nzvimbo yekuvaka yakasununguka.
Iyo yemeso yekurapa nzvimbo yakasvibiswa uye inofanirwa kucheneswa kana kutsiviwa.
Kudhinda vacuum mune resin printer
Paunoona makomba asina chinhu Mune mamwe maconvex akatarisana-pasi anodhinda zvikamu, zvinogona kunge zviri nekuda kwekusveta kapu mhedzisiro, kuteya mweya panguva yekudhinda uye kuita kuti gomba iro risazadzwe neresin. Zvakare, inogona kusiya zvisaririra zveakaomeswa resin mutangi, saka zvingave zvine mufungo kusefa resin.
Para gadzirisa dambudziko iri:
Kushaikwa kwemakomba emvura mumhando dze3D dzemakomba kana kuti convex zvikamu. Dhonza maburi mu 3D dhizaini kuitira kuti pave nekuyerera panguva yekudhinda.
Model orientation matambudziko. Edza kudzivirira gomba kuti risanyudzwe nekudzivisa kurizadza nemhepo.
hunhu husina kuvandudzwa
Ndiro rimwe dambudziko risinganzwisisike, asi rinoitika mune mamwe resin 3D maprinta. zvinogona kuonekwa voids muzvikamu zvemukati kana zvimwe zvisina kugadzirwa., kazhinji iine crater shapes, nzvimbo dzakashata, micheto yakapinza, kana musara weresin yakaporeswa pazasi petangi resin.
zvinoitika chete paSLA printers kana chikamu chechikamu chinonamatira kuzasi kwetangi resin uye ichivharira zvishoma laser yekurapa kana sosi yemwenje, ichidzivirira kuti isasvike kune inotevera layer. Uye mhinduro inogona kuva:
Kuparara kana kukuvadzwa kwetangi resin. Tichazofanira kuona kana angori zvisaririra zvinogona kubviswa nekusefa resin uye kuchenesa tangi kana kana akakuvara izvo zvinokumanikidza kutsiva tangi.
Inogona zvakare kuve nekuda kwekushandiswa kwemafuremu Standard resins. Edza imwe mhando ye resin munyaya iyi.
Tarisa nzvimbo dzemaziso, kuti hadzina kusvibiswa kana kusvibiswa. Izvi zvinogonawo kukonzera dambudziko iri.
Zvinogoneka kuti zvinogona zvakare kuve nekuda kwekutarisa kana kutsigira dambudziko reiyo 3D modhi. Inofanira kuongororwa muCAD dhizaini.
Makomba kana kucheka
kana vachikosheswa orifices (zvakadai sediki tunnel kuburikidza nechikamu) kana kucheka mune mamwe matunhu, zvinogona kuitika nekuda kwezvikonzero zvakati:
Debris pane resin tangi pamusoro kana optical hwindo, kana zvimwe zvinoonekwa. Izvi zvinokumanikidza kuti uchenese chikamu chakakanganisika kugadzirisa dambudziko.
Kukwenya kana kusakwana pamusoro petangi resin kana pane chero chinhu chemaziso. Izvi zvaizoita kuti zvive zvakakosha kutsiva chinhu chakakweshwa.
Mitswe inooneka muchikamu chekutanga
Kana iwe uchikoshesa rudzi rwe vhura mitswe kana gill muchikamu chekutanga, sekunge mutsara wega wega wakadhindwa unobvisa kubva mumutsara uri padyo kana kuti unobvisa kubva pachigadziko:
Kureba kwekutanga kwekutanga kwakanyanyisa. Rongedza chikuva chekuvaka.
Yekutanga tembiricha yakadzikira. Seta tembiricha yakakodzera yezvinhu zvauri kushandisa.
Kana pasina chimwe chepamusoro, wedzera hupamhi hwemutsara hwekutanga.
El akashama iko kukanganisa mumaprinta eresin. Vanoumba rudzi rwezvikero kana kuti maprofayiri akatwasuka anobuda kubva panzvimbo yechidimbu. Mamwe anogona kuvharirwa kubva pachimedu panguva yekudhinda, mamwe anoramba akabatanidzwa. Iwo anotsemuka anogona kuyangarara mutangi resin uye kuvharira kuratidzwa, zvichiita kuti mamwe matinji atadze. Mhinduro yako ichapfuura ne:
Iyo resin yakapera.
Kukuvara, marara, kana kuoma kwegore mutangi resin. Tarisa / tsiva tangi uye sefa resin.
Resin inoyerera inoganhurirwa nekushomeka kweiyo modhi kana tsigiro dzakanyanya kudhaka.
Hushasha kana mapundu
Iwe unokwanisa kuona zvikamu zvakapedzwa nazvo pamusoro roughness, senge makwinya, mitsetse isina kuenzana, mapundu kune rimwe kana mamwe mativi echidimbu, nezvimwe. Iri dambudziko revadhinda resin rinokonzerwa ne:
Nzvimbo dzakasvibiswa dzemaziso dzinofanira kucheneswa.
Izwi rekuti over-compression rinotsanangura chikanganiso chakakonzerwa muzvikamu zvakadhindwa resin. Zvinoitika kana nzvimbo iri pakati pepuratifomu yekuvaka uye elastic layer, kana inochinjika firimu, yetangi resin yakaderedzwa uye inokonzera mativi ekutanga akatetepa zvakanyanya, saka vachaita sevakaputswa. Izvo zvakare zvinoita kuti zvinyanye kunetsa kuparadzanisa chidimbu kubva pachigadziko, kana kusiya mabhesi akadzikama uye mapfupi mapendero kupfuura akajairwa. Kuti ugadzirise izvi, tarisa kuiswa kwefoiri.
Kushaikwa kwekunamatira mune resin 3D printer
When the zvinoonekwa zvakapatsanurwa zvishoma kana zvachose kubva pachigadziko kudhinda kunoratidza kuti pane dambudziko rekunamatira. Zvimwe zvinogona kukonzerwa ne:
Iyo yakaporeswa resin ndiro pazasi petangi (kushaikwa kwekunamatira kwakazara) kubviswa.
Dhinda pasina hwaro hwakakodzera kana nzvimbo.
Yekutanga layer yekubata idiki zvakanyanya kutsigira huremu hwechikamu.
Kukuvara, marara, kana kuoma kwegore mutangi resin. Sefa, chenesa, kana shandura resin.
Yakawandisa nzvimbo pakati pechigadziko chekudhinda uye elastic layer kana elastic firimu resin tank.
Silhouettes pachigadziko chekudhinda (resin 3D printer)
Zvinokwanisika kuti dzimwe nguva wakambosangana nazvo silhouettes yezvidimbu zvakadhindwa pachigadziko chekudhinda. Chigadziko kana kuzorora chine chimiro chakanamirwa pachigadziko uye kuti chasara chikamu hachidhindike kana chinogona kunge chakabva uye chiri mutangi resin. Muzviitiko izvi, zvikonzero zvinowanzoitika ndezvi:
Nzvimbo dzemaziso dzakasvibiswa neimwe mhando yetsvina, marara, kana huruva. Ramba uchifunga kuti kunyange zvazvo zvimedu izvi zvinogona kuvhara danda, mapeji ekutanga anowanzove ane nguva yakareba yekurapa, saka zvinokwanisika kuti aya mapeji ekutanga achaumba uye kwete chikamu chese.
Inogona zvakare kuve nekuda kwemarara, kukuvara kana turbidity mutangi resin.
Uyezve tarisa mamiriro ehwindo re acrylic resin tank.
Uye girazi guru.
The leveling screw yasvika painogumira
Zvingangodaro kuti kana uchiedza kuyera base uchaona kuti iyo kugadzirisa sikuruu yasvika painogumira mune imwe yenzira dzayo dzekufamba. Kana zvakadaro, unogona kudzoreredza kumwe kufamba nekusunungura sikuruu iyo inobata nekupera kweakisi sitiroko yeZ. Chenjerera negadziko kana rakagadzirwa negirazi, sezvo muromo unogona kudonha kamwe kamwe wobvaruka.
Dudzira 3D printer kukanganisa macode
Kana iwe ukaona kukanganisa kodhi pachiratidziri Printer's LCD inogona kusapa data rakakwana kuona dambudziko. Zvakare, imwe neimwe kugadzira uye modhi inogona kunge iine akasiyana makodhi makodhi. Naizvozvo, kududzira kodhi unofanirwa kuverenga bhuku remuenzaniso wako muchikamu chekugadzirisa matambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » 3D kudhinda » 3D printer spare parts uye kugadzirisa
Filaments ye3D printers uye resin